Ntuziaka 5 dị egwu iji mepụta arụmọrụ gị okpukpu abụọ | Martech Zone
Dawud akpado m na ya blog. O nwere nnukwu post n'ebe ahu Otu esi etinye uche na ọrụ ka ukwuu. N'ime ya, ọ na - agwa otu o si ewepụta nkeji 50 kwa ụbọchị iji lekwasị anya ma mezuo.
Anọbeghị m ịdọ aka ná ntị iwepụta oge kwa ụbọchị dị ka nke a mana ọ bụ ihe m ga-anwale. Nke a bụ otu m si arụ ọrụ… na ụfọdụ n'ime ya nwere ike ịda ụda dị egwu mana ọ na - enyere m aka ijikwa ụbọchị ọrụ dịka ọ na - agaghị achịkwa. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ụfọdụ ndụmọdụ m na usoro m si jikọta na Dawud!
N'oge gara aga, ekwenyere m na m gụọla na onye ọrụ America na-arụ ọrụ na-ewepụta ihe dị ka awa 5 nke ọrụ kwa ụbọchị ọ bụ ezie na ha na-arụ ọrụ karịa 8. Nke a bụ otu esi gbue elekere ise ahụ wee nweta awa 5 na arụ ọrụ na elekere 10 ụbọchị.
Kwụsị ịza ekwentị gị:
Anaghị m aza ekwentị m ma ọ bụ ekwentị m belụsọ ma m dị njikere. Ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m ejirila nke a mara ụfọdụ na-enye m oge siri ike banyere ya. Fọdụ ndị chere na ọ dị njọ. Achọghị m. Tụgharị ekwentị gị ma ọ bụ ekwentị gị n’ozi olu bụ nke imechi ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ gị iji rụọ ọrụ. M kwenyere na nke ahụ arụpụtaghị ihe na-adabere n'ikeNa-agbasi mbọ ike, ị naghị arụpụtakarị ihe. Maka ndị nọ ebe ahụ mmemme ahụ, nke a bụ eziokwu karịsịa. Enwere m ike ịnweta mmemme otu izu n'otu ụbọchị ma ọ bụrụ na anaghị m egbochi. Ọtụtụ oge, ana m eme ihe omume abalị niile na ọrụ n'ihi na ọ na-enye m ohere 'ịbata na mpaghara ahụ'. Echekwa ego: 1 hour kwa ụbọchị.
Kwụsị ige ntị na Ozi olu:
Anaghị m ege ntị n’ozi olu. Kedu ihe ọ bụ?! Ikwuru na ị naghị aza ekwentị ma ugbu a ị naghị ege ozi olu?! Nope. Ana m enyocha ozi olu m ma ozugbo m nụrụ onye ọ bụ, m na-ehichapụ ozi ahụ ozugbo wee kpọọ ha. Achọpụtala m na 99% nke oge, m ga-akpọghachi onye ahụ, yabụ gịnị kpatara ị ga-eji gee ozi olu ahụ niile? Peoplefọdụ ndị na-ahapụ ozi ogologo oge! Ọ bụrụ na ị hapụụrụ m ozi olu, hapụ aha gị na nọmba gị na ngwa ngwa gị. Aga m akpọghachi gị ozugbo m nwere ohere. Enwere m ọtụtụ esemokwu banyere nke a. Echekwa ego: Nkeji 30 kwa ụbọchị.
DWT - Drivegbọala Mgbe Talk Na-ekwu Okwu:
Ana m akpọ ndị mmadụ mgbe m na-anya ụgbọala. Enwere m ihe dị ka elekere 1 kwa ụbọchị mgbe ọ na-eme njem ma ọ bụ oge kacha mma m kwesịrị ịgwa ndị mmadụ okwu. Enwebeghị m nso ịbịaru ihe ọghọm nke mere achọghị m ịnụ ihe nzuzu a niile gbasara ịnya ụgbọ ala mgbe m na-ekwu okwu bụ nsogbu. Enwere m ike itinye uche na ha abụọ. Ọ bụrụ na okporo ụzọ adị njọ, aga m agbaghara onwe m ma kpọghachi onye ahụ. Echekwa ego: 1 hour kwa ụbọchị.
Ajụrụ m akwụkwọ ịkpọ oku. Ọ dị mma, ị na-ekwu, ugbu a isi adịghịzi ya! Achọpụtara m na ọtụtụ nzukọ bụ oge na-efu. You'll ga-ahụta m nke siri ike ịnakpọ akwụkwọ ịkpọ oku na-enweghị usoro ma ọ bụ atụmatụ mmemme. Ọ bụrụ na enweghị ebum n’uche banyere nzukọ ahụ, enwere m ike agaghị abịa. Ọ na-ewute ụfọdụ ndị mụ na ha na-arụ ọrụ, ma anaghị m echegbu onwe m maka ya. Oge m baara m na ụlọ ọrụ m uru. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwanyere nke ahụ ugwu, ọ bụghị nsogbu m - ọ bụ nke gị. Mụta otu esi ejikwa oge ndị mmadụ eme ihe nke ọma! (M na-aza email na PDA m n'oge nzukọ mgbe anaghị elebara anya m anya.) Echekwala ego: awa 2 kwa ụbọchị.
Dee na Ekekọrịta Atụmatụ Atụmatụ:
Nke a nwere ike ọ bụghị ụdị ahụ dị egwu. Agbanyeghị, ọ bụ ihe dị mkpa iji na-arụ ọrụ. M na-edetu atụmatụ ihe omume nke nwere Whonye, ​​Kedu na mgbe na, nke kachasị mkpa, kekọrịta ya na mmadụ ma ọ bụ otu egwuregwu mụ na ha na-arụ.
onye - Onye ga - enweta it m, ma ọ bụ onye m ga-enweta it ka?
Kedu - Kedu ihe a na-anapụta? Kpọọ okwu aha!
Mgbe ole - Olee mgbe a ga-anapụta ya? A ụbọchị na ọbụna a oge ga-achụpụ gị izute gị usoro iheomume.
Ego echekwara: Nkeji 30 kwa ụbọchị.
WFS: Na-arụ ọrụ Site na Starbucks
Otu ndụmọdụ ọzọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka gị: Ana m arụ ọrụ site na Starbucks. N'ụtụtụ ebe m na-enweghị nzukọ, oku ndị ahịa, ma ọ bụ soro ndị otu m rụọ ọrụ, m na-agakarị Starbucks ma kụtuo ọrụ ahụ. Starbucks na-ekwo ekwo na ndị mmadụ na -emepụta gburugburu ebe obibi nke ọgba aghara m hụrụ n'anya. Ana m arụsi ọrụ ike na ngwa ngwa na Starbucks. Oche ndị na-adịghị mma na-enyekwara aka. Ọ bụrụ na enweghị m ike ịpụ ebe ahụ ngwa ngwa, m ga-akwa ụta site na akpịrị dị n'okpuru. Echekwa ego: 4 awa kwa izu.
Chei, I ji ihe nzuko ahu kpogbuo ya. Ebe m na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ị jụ nzukọ, a na-ewere ya ka mkparị, dị ka ọbụbụ ọnụ!
Go na-aga nzukọ, nkeji 5 na ya, akụkọ ndụ onwe onye na-abịa ma ọ bụrụ ihe na-emekọ ihe. Nke ahụ na-akpasu m iwe na-adịghị ndụ! Nzukọ nke 10 na-agbatị ruo otu awa n'ihi nke ahụ!
M ga-amalite na-agbasasị nzukọ ma na-enweghị nzube ebumnuche ma ọ bụ burukwa, ma ọ bụ ndị m na-achọghị m mkpa.
Mee 4, 2007 na 7: 39 AM
Aghọtaghị m mgbe ahụ, AL. 'Ndị isi' bụ ma e wezụga ịchị achị. 🙂
Kwesịrị ị na-a lee anya na a akwụkwọ ọhụrụ na-apụta na-akpọ Anọ Hour Work Week site Timothy Ferriss. Ọ naghị enwe nzukọ, ma na-enyocha email otu ugboro n'izu ma ọ bụ karịa - n'otu aka ahụ ka ihe ị na-ekwu. Ọ dịbeghị anya m gere ntị okwu SXSW ya ma chọpụta na ọ na-akpali akpali n'ezie. Na-atụ anya ịgụ akwụkwọ ahụ.
Apr 29, 2007 na 12: 31 AM
Achọtara m Blog nke Tim Ferris nakwa. Na-atụ anya ịlele akwụkwọ ahụ!
Apr 30, 2007 na 8: 13 AM
Eeh. Iji na-arụpụta ị ga-etinye oku ekwentị na email n'ọnọdụ ha. Ọ bụrụ n’ị bụụrụ ha ohu ogologo ụbọchị niile - ọ dịghị ihe ọzọ ha na-eme ma mebie ọrụ gị.
Mee 4, 2007 na 7: 38 AM
Daalụ Dawud! N’ebe anyị bi ‘American-Me-Me-Me’, ụfọdụ ndị folks anaghị ekele ya ma ọ bụrụ na ịgaghị aza ozi email ma ọ bụ oku ekwentị ozugbo. Mana ekpebisiri m ike ịghọta.
Apr 30, 2007 na 11: 34 AM
Gụ ozi email nwere ike inu oke oge. Amaara m ụfọdụ ndị mmadụ ga-agụrịrị ozi ọ bụla ozigbo ha nụrụ “ding” ahụ. M gbanyụọ akwụkwọ ozi email m, agụrụ m email na oge m. Oge ụfọdụ n'ụbọchị kachasị mma maka m ịgụ email, aza oku, wdg.
Ugbu a ị kwughị banyere ịde blọgụ, mana ọ na-ewe oge! 😉
Mee 4, 2007 na 7: 37 AM
Gingde blọgụ bụ ego, n'agbanyeghị, Becky. Ana m ịkparịta ụka n’ andntanet ma na-amụtakwu ịgụ ihe na ide ihe. Nakwa, na ụfọdụ obere mgbasa ozi mgbasa ozi, ana m akwụ ụgwọ na blọọgụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na m na-eme nke a akpa otu awa ma yet ma m na-eche na ọ bụ ọnụ ahịa ya na ọgwụgwụ.
Daalụ maka ntinye! O doro anya na ịgụ na sọọfụ na-enweghị njedebe nwere ike ime ka mmadụ ghara ịmị mkpụrụ!
Mee 3, 2007 na 4: 04 PM
Akwa post - hụrụ ya n'anya. Dị mma karịa ndepụta na-adịghị agwụ agwụ nke usoro ntinye aka 20-30 nke ị na - enweghị ike icheta, echefula imejuputa ya.
Mee 4, 2007 na 7: 35 AM
Ekwenyere m gị John! Ọ gaara arụpụta ihe ọ bụla iji mee ka onye ọ bụla gụọ ihe karịrị ise!
Mee 3, 2007 na 11: 51 PM
Ọ bụ Alerts Google na sọọfụ na-eme m! Daalụ maka inye m ikike ịga Mpaghara.
Mee 4, 2007 na 7: 40 AM
Alerts Google ka m na-aga. Naanị m na-elele ha ugboro abụọ kwa ụbọchị!